ILSI SEA REGION & ASEANFOODS FOODCOMP TRAINING COURSE 2018: Development and Evaluation of Quality Food Composition Database ကျင်းပ
၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၃ ရက် နံနက် ၉:၀၀ နာရီတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန၊ ILSI SEA Region, ASEANFOODS နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ Institute of Nutrition, Mahidol University တို့ပူးပေါင်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်သော ILSI SEA Region & ASEANFOODS FOODCOMP Training Course 2018: Development and Evaluation of Quality Food Composition Database သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ဗဟိုဇီဝဆေးပညာစာကြည့် တိုက် အစည်းအဝေးခန်းမ(၁)၌ကျင်းပရာ ဆေးသုတေသန ဦးစီးဌာန ခေတ္တညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးတက်ရောက်၍ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားပါသည်။ ထို့နောက် စင်္ကာပူ သမ္မတနိုင်ငံ ILSI SEA Region မှ Director Ms. Pauline Chan က International Life Sciences Institute(ILSI) အကြောင်း မိတ်ဆက် အမှာစကားပြောကြားပြီး၊ ထိုင်းနိုင်ငံ ASEANFOODS မှ Coordinator Assoc. Prof. Kunchit Judprasong (Institute of Nutrition, Mahidol University) က Association of Southeast Asian Network of Food Data Systems အကြောင်းကို ရှင်းလင်း တင်ပြသွားပါသည်။ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအပြီးတွင် တက်ရောက်လာသူများ အမှတ်တရစုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ကူး ခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါသင်တန်းကို စက်တင်ဘာ ၃ ရက်မှ ၇ ရက်နေ့အထိ (၅)ရက်တိုင် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်တွင်အတွေ့အကြုံရှိသော ဝါရင့်ပညာရှင်များဖြစ်ကြ သည့် နယူးဇီလန်နိုင်ငံ Massey University's College of Health Sciences မှ Professor Barbara Burlingame, ထိုင်းနိုင်ငံ Institute of Nutrition, Mahidol University မှ Assoc. Prof. Prapasri Puwastien, Assoc. Prof. Kunchit Judprasong နှင့် Mr. Piyanut Sridonpai တို့က Food composition database development, Laboratory quality control system in Food composition data generation and Quality evaluation and checking at different steps throughout the developing process of national food Composition Database များကိုသင်ကြားပို့ချခဲ့ကြ ပြီး၊ Organizers အဖြစ် စင်္ကာပူသမ္မတနိုင်ငံ ILSI SEA Region မှ Ms. Pauline Chan နှင့် Ms. Jocelyn Wong၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန အာဟာရဓာတ် သုတေသနဌာနခွဲမှ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး/ဌာနခွဲမှူး ဒေါက်တာမို့မို့လှိုင်တို့က ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါသင်တန်းသို့ ကျန်းမာရေး နှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး (သုတေသန) ဒေါက်တာ သိင်္ဂီသွင်နှင့် သုတေသီ(၁၀)ဦး၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ အမျိုးသား အာဟာရဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် သုတေသန ဌာနခွဲမှ သင်တန်းသား(၃)ဦး၊ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေး ဦးစီးဌာနမှ သင်တန်းသား(၂) ဦး၊ ကမ္ဗောဒီးယားနိုင်ငံ၊ လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံတို့မှ သင်တန်းသား(၄)ဦး စုစုပေါင်း (၁၉)ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး သင်တန်းကို မြန်မာ့အစားအသောက် များ၏ အာဟာရတန်ဖိုးများကိုဖော်ပြသော ဇယားပြုစုရန်အတွက် အခြေခံ နှင့် လက်တွေ့ သဘောတရားများကိုသိရှိနားလည်စေရန်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Dissemination Workshop on Operational Research of Harm Reduction Service Availability and Linkage for PWIDS အခမ်းအနားကျင်းပ
၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၇ ရက် နံနက် ၉:၀၀ နာရီတွင် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနနှင့် အမျိုးသားမူးယစ်ဆေးဝါး ထိန်းချုပ်ရေးစီမံချက်တို့ IR/OR Grant ဖြင့်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် Operational Research on "Harm Reduction Service Availability and Linkage for PWIDS among Public and Private Service Providers in Selected Priority Townships" လက်တွေ့ အသုံးချသုတေသနတွေ့ရှိချက်များကိုဖြန့်ဝေခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနားကို နံနက် ၉:၀၀ နာရီမှ မွန်းလွဲ ၁:၀၀ နာရီထိ ရန်ကုန်မြို့၊ အလုံလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ Summit Parkview Hotel (Yangon) Ballroom တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (သုတေသန)ဒေါက်တာလှိုင်မြတ်သူ တက် ရောက်၍ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားပါသည်။ ထို့နောက် တက်ရောက်လာသူများ စုပေါင်း၍ အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့ကြပါသည်။ ဆက်လက်၍ အမျိုးသားမူးယစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးစီမံချက်၊ မူးယစ်ဆေးစွဲ ကုသရေးနှင့် သုတေသနဌာနမှ စီမံချက်မန်နေဂျာ ဒေါက်တာနန္ဒမျိုးအောင်ဝမ်းက"Harm Reduction Service Availability and Linkage for PWDS among Public and Private Service Providers" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ဆေးသုတေသန ဦးစီးဌာနမှ သုတေသနအရာရှိ ဒေါက်တာကျော်လွင်ရှိုးက နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ အကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(ငြိမ်း) ဒေါက်တာလဲ့လဲ့ဝင်းက သုတေသနတွေ့ရှိချက်များ အပိုင်း(၁)ကိုလည်းကောင်း၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး/ ဌာနခွဲမှူး ဒေါက်တာယဉ်သက်နုဦးက တွေ့ရှိချက်အပိုင်း (၂) နှင့် Recommendations တို့ကိုလည်းကောင်း အသီးသီးရှင်းလင်းတင်ပြကြရာ တက်ရောက်လာသူများက ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ကြပြီး ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်အ ကြံပြုချက်များကို ဖော်ထုတ် အတည်ပြုခဲ့ကြပါသည်။
အဓိကကျသောအချက်များမှာ မက်သာဒုံးတိုက်ကျွေးသော ဆေးခန်းများတွင် ကြုံတွေ့ နေရသော ဝန်ထမ်း အခက်အခဲပြဿနာများ ဖြေရှင်းစေနိုင်ရန်အတွက် အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်းများ လုံလုံလောက်လောက် ခန့်အပ်နိုင်စေရန်၊ မက်သာဒုံးဆေးသောက်နေသူများအတွက် Unique ID တစ်ခုသတ်မှတ်နိုင်ရန်နှင့် ပြည်သူလူထု၏ Harm Reduction Services များအပေါ် လက်ခံနိုင်မှု သဘောထားများနှင့် နားလည်ဘောပေါက်မှုအခြေအနေများကို သုတေသနများ ဆက်လက်ပြုလုပ်ရန် အကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (သုတေသန)များ ဖြစ်ကြသော ဒေါက်တာလှိုင်မြတ်သူ၊ ဒေါက်တာခင်စောအေးနှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး/ ဌာနခွဲ မှူးများ၊ သုတေသီများ၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန လူပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ် သုတေသနစမ်းသပ်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ် ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာဖေသက်ခင်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာ အန္တရာယ်လျော့ကျစေရေး လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်နေသော ပြည်တွင်း/ပြည်ပ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြသည့် မြန်မာနိုင်ငံ မူးယစ် ဆေးဝါးဆန့်ကျင်ရေးအသင်း (MANA)၊ စွဲစေတတ်သော ဆေးဝါးများဆိုင်ရာ သုတေသနအဖွဲ့(SARA)၊ Asian Harm Reduction Network(AHRN)၊ Burnet Institute၊ Health Poverty(HPA)၊ ICAP, CHAI, PSI၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြသော WHO, UNODC, UNAIDS တို့မှတာဝန်ရှိသူများ စုစုပေါင်း (၄၃)ဦး ခန့် တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မြင့်ထွေး၏လမ်းညွှန်မှုကိုခံယူ
၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၈ ရက် မွန်းလွဲ ၂:၁၅ နာရီတွင် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးသည် ဆေးသုတေသန ဦးစီးဌာန ဗဟိုဇီဝဆေးပညာစာကြည့်တိုက် အစည်းအဝေးခန်းမ(၁)၌ ကျင်းပသည့် (၄၇) ကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသုတေသနညီလာခံ ပြုလုပ်ကျင်းပမည့် အစီအစဉ်နှင့် ညီလာခံအတွက် သီးသန့်အင်တာနက် ဝက်ဘ်ဆိုက် (website) ပြုလုပ်ထားရှိမှု နှင့်ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းတင်ပြပွဲသို့ တက်ရောက်လမ်းညွှန်ခဲ့ပါသည်။
ရှေးဦးစွာ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ခေတ္တညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဖြစ်သူ ဆေးတက္ကသိုလ်(၁) ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးက (၄၇) ကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သုတေသနညီလာခံ ပြုလုပ်ကျင်းပမည့် အစီအစဉ်နှင့် ညီလာခံအတွက် သီးသန့်အင်တာနက် ဝက်ဘ်ဆိုက် (website) ပြုလုပ်ထားရှိမှု တို့ကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ညွှန်ကြားရေးမှူး(သုတေသန) ဒေါက်တာဝင်းပပနိုင်က မြန်မာနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သုတေသနညီလာခံ သီးသန့်အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက် (website)နှင့် ပတ်သက်၍ဆောင်ရွက် ထားရှိမှုအခြေအနေကို လည်းကောင်း၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (သုတေသန)များဖြစ်ကြသော ဒေါက်တာလှိုင်မြတ်သူ၊ ဒေါက်တာခင်စောအေးနှင့်	ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(စီမံ/ဘဏ္ဍာ) ဒေါက်တာဇော်မြင့်တို့က Ethical Review Committee နှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသော ဆေးသုတေသန လုပ်ငန်းများကို ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြပါသည်။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ဆေးသုတေသနလုပ်ငန်းများသည် ဆေးပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မရှိမဖြစ်အရေးပါကြောင်း၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများ၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်ငန်းများ၊ ဆေးပညာသင်ကြားရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဆေးသုတေသနလုပ်ငန်းများ၏ အထောက်အကူရရှိမှု မှာ အထူးအရေးကြီးကြောင်း၊ ဆေးသုတေသနလုပ်ငန်းများမှ ရရှိလာသောအဖြေရလဒ်များ၊ အကြံပြုချက်များ ကိုပြည်သူများအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်လည်းကောင်း၊ ဆေးပညာသင်ကြားရာတွင် လည်းကောင်း လက်တွေ့အသုံးချခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းများစရိတ်စက နည်းပါးစွာဖြင့်ပိုမိုအောင်မြင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက် (website)ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုရ လွယ်ကူပြီး လိုအပ်သောအကြောင်းအရာ အချက် အလက်များအလွယ်တကူရရှိနိုင်စေရန် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ညီလာခံကြီးတွင် ဝန်ကြီးဌာနရှိ ဆေးနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ နှီးနွယ်တက္ကသိုလ်များ၊ ဦးစီးဌာနများ၊ ပြည်တွင်း/ ပြည်ပဆေးသုတေသန ပညာရှင်များနှင့် စိတ်ပါဝင်စားသူများတက်ရောက်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ကြစေလိုကြောင်း၊ ဆေးသုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင် ရွက်ရာတွင် ခေတ်နှင့်လျော်ညီသော၊ ရှိရင်းစွဲမှ ဖောက်ထွက်သော အတွေးအမြင်၊ အကြံဉာဏ်များဖြင့် စုစည်း ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အောင်မြင်မှုများပိုမိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားလမ်းညွှန်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါရှင်းလင်းတင်ပြပွဲသို့ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး) ဒေါက်တာသာထွန်းကျော်၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှ ခေတ္တညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့် တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန၊ ကဝမြို့နယ် ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန နှင့် ရွှေရောင်နှင်းဆီကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်းတို့ ပူးပေါင်းစီစဉ်၍ ကင်ဆာရောဂါပညာပေးဟောပြောပွဲနှင့် ဆေးစစ် အစီအစဉ် အခမ်းအနားကို ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကဝမြို့၊ မြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင်၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၉ ရက် နံနက် ၉:၀၀ နာရီ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာ ကျော်ဇင်သန့် တက်ရောက်၍ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပါသည်။ ထို့နောက် ရွှေရောင်နှင်းဆီကင်ဆာဖောင်ဒေး ရှင်း ဥက္ကဋ္ဌ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာရင်ရင်ထွန်းက ဖောင်ဒေးရှင်းအကြောင်းကိုပြောကြားပါသည်။ ထို့နောက် ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင်က ကျန်းမာအောင်နေထိုင်ခြင်းဖြင့် မကူးစက်နိုင်သော ရောဂါများကို ကာကွယ်ခြင်း အကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာရင်ရင်ထွန်းက သားအိမ်ကင်ဆာကြိုတင်ကာကွယ် စစ်ဆေးရန် သိကောင်းစရာများကိုလည်းကောင်း၊ ဒေါက်တာမေကြည်က ရင်သားကင်ဆာ အကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာဆွေဆွေဝင်းက ခံတွင်းကင်ဆာအကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ ဒေါက်တာတင့်မျိုးနှင်းက ကလေးကင်ဆာအကြောင်းကိုလည်းကောင်း အသီးသီးပညာပေးဟောပြောကြရာ တက်ရောက် လာသူများက သိလိုသည်များကို ဝိုင်းဝန်းမေးမြန်းကြရာ ဆရာဝန်ကြီးများက ပြန်လည် ရှင်းလင်းဖြေကြားကြပါသည်။ ထို့နောက် ပညာပေးဆေးစစ်အစီအစဉ်များကို ဆက်လက်ပြုလုပ်ရာ ရင်သားစမ်းသပ်နည်းသင်ပေးခြင်းနှင့် စမ်းသပ်စစ် ဆေးပေးခြင်း၊ သားအိမ်ခေါင်း စမ်းသပ်ပေးခြင်းနှင့် လိုအပ်သူများကိုCrytheropy ဖြင့်ကုသပေးခြင်း၊ ခံတွင်း စမ်းသပ် စစ်ဆေးပေးခြင်း၊ ကင်ဆာရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီးနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း၊ ကလေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း၊ အသည်းရောင် ဘီပိုးစစ်ဆေးပေးခြင်း၊ သွေးချိုစစ်ဆေးပေးခြင်း၊ သွေးပေါင်ချိန် တိုင်းတာခြင်း၊ အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါဟောပြောပွဲနှင့် ဆေးစစ်အစီအစဉ်အခမ်းအနားသို့ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာကျော်ဇင်သန့်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (သုတေသန) ဒေါက်တာခင်စောအေးနှင့်ညွှန်ကြားရေး မှူးများ၊ သက်ဆိုင်ရာ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး/ ဌာနခွဲမှူးနှင့် သုတေသီပညာရှင်များ၊ ရွှေရောင်နှင်းဆီ ကင်ဆာ ဖောင်ဒေးရှင်း ဥက္ကဋ္ဌ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာရင်ရင်ထွန်းနှင့် အဖွဲ့ဝင်ဆရာဝန်ကြီးများ၊ ဆရာဝန်များ၊ ဓာတ်ခွဲခန်း ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များ၊ ကဝမြို့နယ် ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန မြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံမှ မြို့နယ် ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာမောင်မောင်ချစ်၊ သူနာပြုနှင့်သားဖွားဆရာမများ၊ ကျန်းမာရေးမှူးများ၊ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများ၊ ဆေးရုံအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များ၊ လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် များနှင့် မြို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ဝင်များ၊ မြို့နယ်သူမြို့နယ်သား စိတ်ပါ ဝင်စားသူ စုစုပေါင်း (၂၅၀) ဦး တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
“Training for Advanced Management of Tropical Febrile Infectious Diseases” သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပ
၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက် နံနက် ၉:၀၀ နာရီတွင် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနနှင့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ အင်ဟာတက္ကသိုလ်တို့ ပူးပေါင်းစီစဉ်သည့် “Training for Advanced Management of Tropical Febrile Infectious Diseases”သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (ပြင်ဦးလွင်ရုံးခွဲ) အစည်းအဝေးခန်းမ(၁)၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (သုတေသန) ဒေါက်တာခင်စောအေး တက်ရောက်၍ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီး ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါ သည်။ ဆက်လက်၍ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ ယူဂျီတက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ Hae-Wol CHO ကလည်း ကောင်း၊ အင်ဟာတက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ Tong-Soo KIM က လည်းကောင်း အသီးသီးအမှာစကား ပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်များ၊ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံမှ ပါမောက္ခ၊ တွဲဖက်ပါမောက္ခများနှင့် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (ပြင်ဦးလွင်ရုံးခွဲ)မှ သင်တန်းသား/သူများ စုစုပေါင်းအယောက် (၇၀)ကျော်ခန့် တက်ရောက်ပြီး နံနက် ၉:၃၀ နာရီတွင် အခမ်းအနား ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပါသည်။ ထို့နောက် တက်ရောက်သူများစုပေါင်း၍ မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံများရိုက်ကူးကြပါသည်။ အဆိုပါ သင်တန်းကို စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက် မှ ၁၄ ရက်နေ့ အထိ (၅)ရက်တိုင်တိုင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက် နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီတွင် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာရပ် ဆိုင်ရာ အဖွဲ့၏၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို လူမှုဆေးပညာ သုတေသနအစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ခေတ္တညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဆေးတက္ကသိုလ်(၁) ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာ ဇော်ဝေစိုးနှင့် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာရပ် ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် ခေတ္တညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးက Web Portal၊ Website နှင့်Social Media များ တွင် လွင့်တင်ထားသည့် ကိန်းဂဏန်း၊ စာရင်းဇယားအချက်အလက်များအား အချိန်နှင့်တပြေးညီ မှန်ကန်စေရန် အတွက် စဉ်ဆက်မပြတ် Update လုပ်ဆောင်ထားရန် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး၏ လမ်းညွှန်ထားမှုအား ရှင်းလင်းမှာကြားပါသည်။ ထို့နောက် ညွှန်ကြားရေးမှူး(သုတေသန) ဒေါက်တာ ဝင်းပပနိုင်က မြန်မာနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သုတေသနညီလာခံ(MHRC) သီးသန့် အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက် (website)နှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေကိုလည်းကောင်း၊ သတင်း အချက်အလက်နည်း ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (စီမံ/ဘဏ္ဍာ) ဒေါက်တာဇော်မြင့်က ဆောင်ရွက် ပြီး၊ ဆောင်ရွက်ဆဲ၊ ဆောင်ရွက်ရန်လျာထားချက်များကိုလည်းကောင်း အသီးသီး တင်ပြကြရာ ခေတ္တ ညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ် ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးက လိုအပ်သည်များကို လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးကို နံနက် ၁၁:၃၀ နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါသည်။
Verification of Disbursement Linked Indicators (DLI) Year-3: Data Collection Training ကျင်းပခြင်း
၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက် နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီတွင် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနှင့် World Bank Myanmar Group တို့ ပူးပေါင်းစီစဉ်သော Verification of Disbursement Linked Indicators (DLI) Year-3: Data Collection Training အခမ်းအနားကို ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ဗဟိုဇီဝဆေးပညာစာကြည့်တိုက်အစည်း အဝေးခန်းမ(၁)၌ကျင်းပရာ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(သုတေသန) ဒေါက်တာလှိုင်မြတ်သူ တက်ရောက်၍ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားပါသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှ ခေတ္တညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ် ဆေးတက္ကသိုလ်(၁) ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးနှင့် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး/ဌာနခွဲမှူးများ၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာမို့မို့ဝင်း၊ World Bank Myanmar Group မှ ဒေါက်တာနန်းမိုခမ်း(Human Development Specialist) ၊ ဒေါက်တာစည်သူ(Monitoring and Evaluation Consultant)နှင့်ကွင်းဆင်း မေးမြန်းမည့်သုတေသီများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအပြီးတွင် တက်ရောက်လာသူများ စုပေါင်း၍ အမှတ်တရဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူး ခဲ့ကြပါသည်။ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်များကို ညွှန်ကြားရေးမှူး (လူမှုဆေး) ဒေါက်တာစောစောနှင့် ကူးစက်ရောဂါဗေဒသုတေသနဌာနခွဲမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာ မျိုးမျိုးမွန်တို့မှဦးဆောင်၍ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲကြပြီး လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းအစီအစဉ်ကို စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်နှင့် ၁၃ရက် (၂) ရက်တိုင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း (၆၀) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (ပြင်ဦးလွင်ရုံးခွဲ)၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက်
၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက် နေ့လယ် ၁၂:၃၀ နာရီတွင် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (ပြင်ဦးလွင်ရုံးခွဲ) အစည်းအဝေးခန်းမ(၁)၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော အထက်မြန်မာပြည်ရှိ တက္ကသိုလ်များနှင့် ဆေးရုံများရှိသုတေသန လုပ်ငန်းများအားဖြည့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး တက်ရောက်၍အမှာစကားပြောကြားပါသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာအောင်ခင်၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး) ဒေါက်တာသာထွန်းကျော်၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ခေတ္တညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဆေးတက္ကသိုလ်(၁) ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုး၊ ခေတ္တညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန) ဦးကျော်သိန်းဌေး၊ ဆေးနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ နှီးနွယ် တက္ကသိုလ်များမှ ပါမောက္ခချုပ်များ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး/ ကုသရေးဦးစီးဌာနမှူးများ၊ ဆေးရုံအုပ်များ၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
ဆက်လက်၍ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(သုတေသန) ဒေါက်တာ ခင်စော အေးက ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (ပြင်ဦးလွင်ရုံးခွဲ)၏ဌာနခွဲများဖွဲ့စည်းထားရှိမှုအခြေအနေ၊ ဝန်ထမ်းရေးရာနှင့် အထွေထွေကိစ္စရပ်များအား လည်းကောင်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာမိုးကျော်မြင့်နှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာရီရီမြတို့က ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (ပြင်ဦးလွင်ရုံးခွဲ)တွင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် Biomedical Research Activities နှင့် Social-Medical Research Activities သုတေသနလုပ်ငန်းများအား လည်းကောင်း ရှင်းလင်း တင်ပြခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်လာသော တာဝန်ရှိသူများ၊ ပညာရှင်များကလက်ရှိကြုံတွေ့နေရသည့် အခက်အခဲများ၊ လိုအပ်ချက်များကိုတင်ပြခဲ့ကြပြီး သုတေသန လုပ်ငန်းများအား ဖြည့်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးကြကာ အကြံပြုချက်များကို တင်ပြခဲ့ကြပါသည်။
သုတေသနအမူအကျင့်ကောင်းများ(သဟဇာတများအတွက်နိုင်ငံတကာကောင်စီ) နှင့်ပတ်သက်၍ သင်တန်းဆရာများအားသင်တန်းပို့ချ “TOT on Good Clinical Practice (ICH GCP) Workshop”
၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက် နံနက် ၉:၀၀ နာရီတွင် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များ အပေါ် သုတေသနစမ်းသပ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်ကော်မတီမှ ကြီးမှူးကျင်းပသော သုတေသနအမူအကျင့်ကောင်း များ (သဟဇာတများအတွက် နိုင်ငံတကာကောင်စီ) နှင့်ပတ်သက်၍ သင်တန်းဆရာများအားသင်တန်းပို့ချခြင်း “Training of Trainer (TOT) on Good Clinical Practice (ICH GCP) Workshop” အလုပ်ရုံဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားအား ဗဟိုဇီဝဆေးပညာ စာကြည့်တိုက်အစည်းအဝေးခန်းမ(၁)၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ဆေးသုတေသန ဦးစီးဌာန ခေတ္တညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဖြစ်သူ ဆေးတက္ကသိုလ်(၁) ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုး တက်ရောက်၍ အဖွင့်မိတ်ဆက်အမှာစကား ပြောကြားပါသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ ဆေးတက္ကသိုလ်များ၊ နှီးနွယ်တက္ကသိုလ်များမှ ပါမောက္ခချုပ်နှင့် ERC အဖွဲ့ဝင်များ၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန လူပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ် သုတေသနစမ်းသပ်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာဖေသက်ခင်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာကျော်ဇင်သန့် နှင့် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့် ဖိတ်ကြားထားသူများ စုစုပေါင်း (၉၀)ဦး ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီတွင် အခမ်းအနားကို ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါသည်။ အခမ်းအနားအပြီးတွင် တက်ရောက်သူများစုပေါင်း၍ မှတ်တမ်းတင် ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့ကြပါသည်။
ထို့နောက် ပထမနေ့သင်တန်းကို နံနက် ၁၀:၁၅ နာရီတွင် စတင်ရာ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန လူပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ် သုတေသနစမ်းသပ်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ပါမောက ဒေါက်တာဖေသက်ခင်က “Introduction to Training Workshop on Good Clinical Practice (GCP) ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် Historical Background, 13 key Principles of ICH GCP, Research Ethics, Drug Regulations တို့ကိုလည်း ကောင်း၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန လူပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ် သုတေသနစမ်းသပ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာမျိုးခင်က “Introduction to Good Clinical Practice (GCP) ”ခေါင်းစဉ်ဖြင့် Introduction to ICH E6(R2) GCP Guideline, Investigators' Responsibilities တို့ကိုလည်းကောင်း၊ ကျင့်ဝတ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာခင်သက်ဝေက “Basic Statistical Concepts and Design” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် Defining the Research Question ကိုလည်းကောင်း၊ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူး(ဘဏ္ဍာရေး) ဒေါက်တာဟန်ဝင်းက “Research Protocol in Clinical Trials” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် How would you improve the clinical trial protocols? ကိုလည်းကောင်း၊ ဒေါက်တာမြတ်ဘုန်းကျော်က “Source Records and Data Management” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် from Case Report Forms to Final Analysis နှင့် Source Records and Data Management ခေါင်းစဉ်ဖြင့် Form Case Report Forms to Final Analysis တို့ကိုလည်းကောင်း ဟော ပြောပို့ချကြရာ တက်ရောက်လာသူများက သိလိုသည်များကို မေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
သင်တန်းဒုတိယနေ့ကို စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက် နံနက် ၉:၀၀ နာရီတွင် ဆက်လက်ကျင်းပရာ ကျင့်ဝတ် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာရဲထွဋ်က “Quality Management” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် SOPS, Training Monitoring Auditing တို့ကိုလည်းကောင်း၊ ဒေါက်တာလှိုင်မြတ်သူက “Research Misconduct and Fraud” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် Definition and Consequences; Case Examples ကိုလည်းကောင်း၊ ကျင့်ဝတ် ကော်မတီအတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာယဉ်သက်နုဦးက “Informed Consent and Safety Reporting” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် Investigator Responsibilities ကိုလည်းကောင်း၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ချုပ် ဒေါက်တာကျော်ဇင်သန့်က “Ethics Committees &Submission Processes, Research Registry and Review of Clinical Trial” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် Ethics Review, Monitoring Clinical Trials, Reviewing SAE ကိုလည်းကောင်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာမို့မို့ထွန်းက Myanmar Health Research Registry (MHRR) ခေါင်းစဉ်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သုတေသနမှတ်ပုံတင်ခြင်းကို လည်းကောင်း ဟောပြောပို့ချခဲ့ကြပြီး၊ အမေးအဖြေကဏ္ဍကိုပြုလုပ်ရာ သဘာပတိများအဖြစ် ဒေါက်တာဖေသက်ခင်နှင့် ဒေါက်တာမျိုးခင်တို့က ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက်အုပ်စု တစ်စုချင်းစီအလိုက် အဖြေများအား ရှင်းလင်း တင်ပြကြရာ ကျန်အုပ်စုများမှ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် တက်ရောက်သူများက ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကျင့်ဝတ် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ပါမောက္ခဒေါက်တာဖေသက်ခင်က သင်တန်းဆင်း လက်မှတ်များကို သင်တန်း တက်ရောက် သူများအား ပေးအပ်ချီးမြှင့်ပြီး သင်တန်းကို ညနေ ၄:၂၀ နာရီတွင် ရုပ်သိမ်း လိုက်ပါသည်။
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine (DTAM), Ministry of Public Health, Thailand မှ အဖွဲ့ လာရောက် လေ့လာ
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက် နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ Department of Thai Traditional and Alternative Medicine (DTAM), Ministry of Public Health မှ ညွှန်ကြားရေးမှူး Mr.Wattanasak Sornrung ဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့ဝင်(၁၀)ဦးပါဝင်သော လေ့လာရေး အဖွဲ့သည် ဆေးသုတေသန ဦးစီးဌာန(ပြင်ဦးလွင်ရုံးခွဲ) သို့ ရောက်ရှိလာရာ တာဝန်ရှိသူများက ကြိုဆိုခဲ့ကြပါသည်။
ဆက်လက်၍ အစည်းအဝေးခန်းမ(၁)၌ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာမိုးကျော်မြင့်က ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်း ဆက် စကားပြောကြားပြီး ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန(ပြင်ဦးလွင်ရုံးခွဲ)၏ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်ရည်မှန်း ချက်၊ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော အဓိကသုတေသနများနှင့် အခြားနိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှုတို့ကို အကျဉ်းချုပ် ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာရီရီမြက ဆေးသုတေသန ဦးစီးဌာန(ပြင်ဦးလွင်ရုံးခွဲ)တွင် ၂၀၁၆ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အထိ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော တိုင်းရင်းဆေးသုတေသန နှင့်တွေ့ရှိချက်များ၊ ဆောင်ရွက်ဆဲနှင့် ဆောင်ရွက်ရန်လျာထားသော တိုင်းရင်းဆေးဆိုင်ရာ သုတေသနများကို အကျဉ်းချုပ် ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ထိုင်းနိုင်ငံ DTAM အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Mr.Wattanasak Sornrung (Head of delegates /Director, Division of Herbs, DTAM ) ကကျေးဇူးတင်စကား ပြန်လည် ပြောကြားပြီး လိုက်ပါလာသူများက သိလိုသည်များကို မေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက်အမှတ်တရ ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန်ပေးအပ်ခဲ့ကြပါသည်။
လေ့လာရေးအဖွဲ့သည် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန(ပြင်ဦးလွင်ရုံးခွဲ)ရှိ ပရဆေး စိုက်ခင်းနှင့် ပရ ဆေးဥယျာဉ်များကို လည်းကောင်း၊ ဓါတ်ခွဲခန်းများ (ဇီဝဓါတုဗေဒ သုတေသန ဌာနခွဲနှင့် ဆေးဝါးဗေဒသုတေသန ဌာနခွဲ)တို့ကိုလည်းကောင်း၊ ဗဟိုဇီဝဆေးပညာစာကြည့်တိုက်နှင့် Mini Herbal Museum တို့ကိုလည်းကောင်း လေ့လာကြရာ တာဝန်ရှိသူများက ရှင်းလင်းဖြေကြားပေးခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် လေ့လာရေးအဖွဲ့အား ဦးစီးဌာနမှ အကျွေးအမွေးဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါလေ့လာရေးအဖွဲ့သည် နေ့လယ် ၁၂:၃၀ နာရီ တွင် ပြန်လည် ထွက်ခွာသွားကြပါသည်။
DLI Verification Year-3: Checklist for Field Data Collection်
၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက် မွန်းလွဲ ၂:၁၅ နာရီတွင် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန Central Verification Team ၏DLI Verification Year-3: Checklist for Field Data Collection အစည်းအဝေး ကို ဇီဝဆေးပညာ သုတေသနအစည်းအဝေးခန်းမ၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (သုတေသန)များ ဖြစ်ကြသော ဒေါက်တာလှိုင်မြတ်သူ၊ ဒေါက်တာ ခင်စောအေး၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (စီမံ/ဘဏ္ဍာ) ဒေါက်တာဇော်မြင့်နှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ Central Verification Team အဖွဲ့ဝင်သုတေသီများတက်ရောက်ကြ၍ ၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့၌ နေပြည်တော် ရုံးအမှတ်(၄ရ) ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနသို့ သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့သော Central Level Verification မှတွေ့ရှိချက်များကို ညွှန်ကြားရေးမှူးများ ဖြစ်ကြသော ဒေါက်တာတင်ဦး၊ ဒေါက်တာသိင်္ဂီသွင်၊ ဒေါက်တာဝါဝါအောင်၊ ဒေါက်တာဟန်ဝင်း၊ ဒေါက်တာစောစော၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(ငြိမ်း/ကျွမ်းကျင်) ဒေါက်တာ ခင်သက်ဝေနှင့် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာမျိုးမျိုးမွန် တို့က ပြန်လည်ရှင်းလင်းတင်ပြကြရာ ဝိုင်းဝန်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးနှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဦးစီးဌာန၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန၊ တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာနနှင့် အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းမိသားစုတို့၏ ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်း အခမ်းအနားကျင်းပ
၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက် နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီတွင် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဦးစီးဌာန၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန၊ တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာနနှင့် အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းမိသားစုများ၏ ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်း အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်မြို့၊ ကမ္ဘာအေးကုန်းမြေရှိ နိုင်ငံတော် ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်) မိုးကုတ် ဆွမ်းစားကျောင်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်၊၊ ရှေးဦးစွာ နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ် ပိဋကတ်ဆိုင် ရာ ပါဠိစာပေဌာန ကထိက ဆရာတော် ဂန္တဝါစကပဏ္ဍိတ ဘဒ္ဒန္တစိန္တာဝရ အမှူးပြုသော ပင့်သံဃာတော် (၅)ပါး နှင့် ဧည့်ပရိသတ်များက “နမောတဿ”သုံးကြိမ်ရွတ်ဆိုဘုရားကန်တော့၍ အခမ်းအနားကို ဖွင့်လှစ်ပြီး၊ ဆရာတော်ဘဒ္ဒန္တစိန္တာဝရထံမှ ငါးပါးသီလခံယူဆောက်တည်ကြပြီးနောက် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ခေတ္တ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဖြစ်သူ ဆေးတက္ကသိုလ်(၁) ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုး၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (သုတေသန) ဒေါက်တာလှိုင်မြတ်သူ၊ ကျန်းမာရေး လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြား ရေးမှူး ဒေါက်တာအောင်ဟိန်း၊ တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တိုင်းဒေသကြီးဦးစီး ဌာနမှူး ဦးသန်းညွန့်၊ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာ ရွှေစင်လှိုင်တို့က လှူဖွယ်ဝါဆိုသင်္ကန်းနှင့်လှူဖွယ်ဝတ္ထုအစုစုတို့ကို ဆက်ကပ်လှူဒါန်းကြပါသည်၊၊ ထို့နောက် ကျန်းမာရေး လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဦးစီးဌာန၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန၊ တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာနနှင့် အစားအသောက် နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်း မိသားစုတို့၏ ဆွမ်းအလှူတော်ငွေ ကျပ်ခြောက်သိန်း တိတိကို ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ခေတ္တညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဖြစ်သူ ဆေးတက္ကသိုလ်(၁) ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးက ပေးအပ်လှူဒါန်းရာ ကပ္ပိယကာရကအဖြစ် သာသနာရေးဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြား ရေးမှူးဦးဇော်ဦးက လက်ခံရယူပါသည်၊၊ ထို့နောက်လှူဒါန်းမှုအစုစုအတွက် ရေစက်သွန်းချ အမျှပေးဝေကာ “ဗုဒ္ဓသာသနံ စိရံ တိဌတု”သုံးကြိမ်ရွတ်ဆို၍ အခမ်းအနားကို အောင်မြင်စွာ ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါသည်၊၊ အခမ်းအနား အပြီးတွင် ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တစိန္တာဝရနှင့် သံဃာတော်များအား နေ့ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါသည်။
သုတေသနစွမ်းအားမြှင့်တင်ခြင်း(Research Capacity Strengthening)နှင့် ဗဟုသုတမျှဝေခြင်းအစီ အစဉ် (Knowledge Sharing Program) အရ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဟောပြောပွဲအခမ်းအနားကို ဆေးသုတေသန ဦးစီးဌာန(ပြင်ဦးလွင်ရုံးခွဲ)အစည်း အဝေးခန်းမ(၁)တွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက် မွန်းလွဲ ၁:၀၀ နာရီ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အထက်ပါ အခမ်းအနားတွင် ကပ်ပါးပိုးဗေဒသုတေသနဌာနခွဲမှ သုတေသနမှူး၊ ဒေါ်ဖြူဖြူဝင်းက သဘာပတိ အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဇီဝဓါတုဗေဒသုတေသနဌာနခွဲမှ သုတေသနလက်ထောက် (၂) ဒေါ်ခင်လေးစိန်က အခမ်းအနားမှူးအဖြစ်လည်းကောင်း အသီးသီးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါဟောပြောပွဲတွင် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန(ပြင်ဦးလွင်ရုံးခွဲ) ကပ်ပါးပိုးဗေဒ သုတေသနဌာနခွဲမှ သုတေသနအရာရှိ ဦးမြမိုးက “Basic Malaria Microscopy” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ရောဂါဗေဒ သုတေသနဌာနခွဲမှ ပစ္စည်းထိန်း(၁) ဒေါ်တင်မိုးခိုင်က “ကျန်းမာသွယ်လှအချိုးကျ နိဿယတစ်ဆယ်” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လည်းကောင်း တင်ပြခဲ့ကြရာ တက်ရောက်လာသူ ဝန်ထမ်းများကသိလိုသည်များကို စိတ်ဝင်စားစွာမေးမြန်း ခဲ့ကြပြီး ဖြည့်စွက် အကြံပြု ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ အထက်ပါဟောပြောပွဲသို့ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (သုတေသန) ဒေါက်တာခင်စောအေးနှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးများ အပါအဝင် ဝန်ထမ်း(၇၂) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြ ပါသည်။
တိရစ္ဆာန်မှတဆင့်လူသို့ကူးစက်တတ်သောဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါများအကြောင်းအသိပညာပေးဟောပြောခြင်းနှင့် Predict-Myanmar သုတေသနလုပ်ငန်း၏ကနဦးသုတေသနတွေ့ရှိချက်များအားဖြန့်ဝေ
၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက် နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီတွင် တိရစ္ဆာန်မှ တဆင့်လူသို့ကူးစက်တတ်သော ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါများအကြောင်း အသိပညာပေးဟောပြောခြင်းနှင့် Predict-Myanmar သုတေသနလုပ်ငန်း၏ ကနဦး သုတေသန တွေ့ရှိချက်များအား ဖြန့်ဝေခြင်း အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မှော်ဘီမြို့နယ် ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး ရုံး၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး(သုတေသန) ဒေါက်တာမို့မို့ထွန်း တက်ရောက်၍ အမှာစကားပြောကြားပါသည်။ ထို့နောက် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ဗိုင်းရပ်စ် ဗေဒသုတေသနဌာနခွဲမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး/ ဌာနခွဲမှူး ဒေါက်တာသိင်္ဂီဝင်းမြတ်က Predict-Myanmar Surveillance of Emerging Zoonotic Diseases ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဟောပြောတင်ပြပါသည်။ အဆိုပါဟောပြောပွဲ သို့ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး (သုတေသန) ဒေါက်တာမို့မို့ထွန်း၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး/ ဌာနခွဲမှူးဒေါက်တာသိင်္ဂီဝင်းမြတ်၊ ဒေါက်တာဥမ္မာအောင် (Project Coordinator), PREDICT Myanmar, Smithsonian Institution နှင့် မှော်ဘီမြို့နယ် ကျန်းမာရေးဦးစီးမှူးနှင့်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ စုစုပေါင်း ( ၅၀) ဦးတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
Read August 2018 Events ...